"Kama Euro-129": umkhiqizo libuyekeza abashayeli "Nizhnekamskshina"
Ukukhetha ithayi semoto yakho, njalo umshayeli ifuna isixazululo inzuzo kakhulu futhi enokwethenjelwa. Njengomthetho, abaningi bakhetha a brand ngaphezulu owaziwa amathayi ukuthi ekhiqizwa phesheya. Nokho, abaningi imikhiqizo okuqukethwe kanye ezifuywayo, ezifana amathayi "Kama Euro 129". Izibuyekezo kulo bayizinkulungwane langempela, futhi lokhu kubonisa ukuthandwa sha phakathi abashayeli.
Inkampani JSC "Nizhnekamskshina" iyona ibhizinisi elikhulu ukwenziwa amathayi eRussia kanye CIS amazwe. Ububanzi mkhiqizo besesitelekeni ukwehlukana kwayo, kanye nokuthuthukiswa yokungaphenduki Ochwepheshe kuphela Russian. Amasondo kwalesi brand Site izimoto njenge Fiat, Chevrolet Niva, Volkswagen, Skoda. Le nkampani iye sekukaningi ahlonishwe nge imiklomelo eminingi eyenzelwe kukhwalithi ephezulu imikhiqizo imvelo. Cishe Rubber "Kama Euro 129" ingenye amakhasimende othandekayo kakhulu.
izinga Russian kuphezulu
AmaRashiya amaningi abasakwazi uyangabaza umkhiqizo, okuyinto ekhiqizwa ezweni lazo. Kodwa eqinisweni kuvela ukuthi ngokuya izinga akuyona nozakwabo phansi kunabaphostoli bakwamanye amazwe. I Kungashiwo okufanayo mayelana amathayi "Kama Euro 129": Izibuyekezo ukuqinisekisa ukuthi lezi amathayi ukuncintisana. Ngokwesibonelo, abashayeli abaningi bathi lokhu ehlobo amathayi imoto isibe lula futhi kuwusizo kakhudlwana. Phakathi amaphuzu omuhle kwaphawula abashayeli ukuthi isondo ukulungiswa elula futhi akubonakali phezu hernia iraba, ukusikeka, kusukela sidewall at kunzima. Abashayeli uqaphele umxhwele ukushayela ukuzinza ngesivinini futhi umsindo ongaphakeme. Kuyaphawuleka ukuthi izinkomba ezinjalo kungaba ngiziqhayise, akubona bonke isondo Western.
Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene ukukhiqizwa isondo Russian
Abaningi bakholelwa ukuthi imikhiqizo Russian okokuqala kungase kungabi high ngoba ayikho i-technology ezifanele noma izinto. Empeleni nje, konkhe kwehlukile ngokuphelele. Okokuqala, amathayi efanayo "Kama Euro 129 R14» zisekelwe ubuchwepheshe bamuva ngokusebenzisa okuzenzakalelayo zokukhiqiza imigqa. Okwesibili, yonke le nqubo yenziwa ngendlela efanayo e-Germany efanayo noma Holland:
Okokuqala lo sekulingisa computer, lapho umenzi kunqunywa i samuntu yimpandla isondo, profile yayo.
It ibalwa ukuziphatha okungenzeka enjoloba ezahlukene izimo ukushayela, kuqala program e-computer.
Ngokukhethwa kukho engcono, bese usika iphethini yimpandla emshinini ekhethekile.
Ngemva kokudala "Kama Euro 129" amathayi (izibuyekezo kuvamile ukukhuluma ngezindawo ke ukuziphatha esitebeleni endleleni) usevele bangenile wangempela ukushayela izimo, futhi ukuqhathanisa Kwenziwa ngezisusa analogue nezinye brand.
Isampula akhethiwe kulethwa esigabeni sokugcina, okusho ukuthi, sephrofayela kushintshwe, le sidewall idwetshwa, nokunye.
Le nkampani ekhiqiza ehlobo, ebusika futhi bonke-inkathi amathayi izimoto namaloli. Ukukhiqizwa Kwenziwa ngokusebenzisa imishini yesimanje kusukela izinkampani emhlabeni odumile, inqubo ngemishini ngokuphelele, ngakho-ke isici womuntu kungenzeka lincishisiwe. Kuyaphawuleka ukuthi isondo "Kama Euro 129" nezinye onobuhle akhiqizwa ngaphansi kokulawula Pirelli Ochwepheshe - eyaziwa inkampani Italy. High umkhiqizo izinga kufinyelelwa ngenxa yokuthi inkampani igxile ukusetshenziswa izinga okusezingeni kuphela izinto zokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, yonke imikhiqizo le ingashintshwa kakhulu izidingo umsebenzisi isiRashiya, ikhumbula zezulu umgwaqo izici.
Mayelana "Euro 129 Kama" isondo Izibuyekezo ezihlukene kakhulu, kodwa abashayeli eziningi ziyavumelana ukuthi iningi izibalo yakhe njengabakhulu kunani onobuhle angaphandle amathayi:
Sinenkosi ezinhle braking ukusebenza kunoma iyiphi surface komgwaqo, okuyinto enomthelela i quin yimpandla iphethini. Ohlangothini olungaphandle ukwakha isango evikelekile emgwaqeni ezomile ingaphakathi - kusukela ezimanzi.
Tyres oluqanjwe "Kama", ukukhombisa izinga eliphezulu wokumelana aquaplaning. Lokhu kufezwa sibonga asymmetrically ahlelwe anemifantu longitudinal ku yimpandla. Okunye anemifantu okuyizinto yomumo ukukhuthaza contact ngempumelelo ne izindawo amanzi okhethiwe.
Amathayi "Kama Euro 129", okuyinto libuyekeza abaningi ushiye omuhle, libhekene ngcono ukuzinza ohlangothini lapho ushayela kunoma iyiphi indlela.
Ngenxa yokuthi i-mass amathayi ehlobo baba ezincane, umenzi ifinyelele uphethiloli umnotho enkulu.
Ukuba nelungelo lobunikazi inkomba isondo bafake ivumela isikhathi ukucacisa lokho esele yimpandla ukujula.
Kusukela lokho ukwenza amasondo zanamuhla?
abakhiqizi yamanje usebenzisa mayelana izinto okufanayo amathayi. Ingxenye injoloba zemvelo, ngokuvamile bengekho ngaphezu kwama-20% kuzo zombili amathayi ezifuywayo amazwe. onobuhle Iningi amathayi ehlobo zenziwa kusukela polyester noma inayiloni, ne kuphela ngesivinini amathayi zakhiwe viscose. ERussia, ngasendleleni, lezi amamodeli ayisekho ekhiqizwa.
A ezihlukahlukene izithasiselo ngesimo amafutha kanye inhlaka kudingeka iraba kwaba ethambile. Oxide zinc lihambisana namanye accelerators iqine kunganciphisa kweqa isilinganiso futhi sithuthukise uphethiloli nekghono. Ngakho, ukusho ukuthi amathayi "Kama Euro 129", ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi omuhle, akusho ukuhlangabezana nezidingo izinga, akunakwenzeka. Ngaphandle kwalokho, uma uthatha iphesenti, eRussia ngokuyinhloko ithengiswe amathayi ekhiqizwa kumazwe.
Model "Kama" izimoto
"Nizhnekamskshina" Le nkampani inikeza anhlobonhlobo isondo onobuhle, ngalinye elikwazi inezici ayo lobuchwepheshe. Ngakho, umfuziselo TC-132 Breeze Road has a ohlangothini yimpandla iphethini, okuyinto lihambisana anemifantu ezine ivumela amanzi ageleze endaweni contact futhi kunciphisa ingozi aquaplaning. Ngenxa isikhungo eqhubekayo ubambo kuba nokuzinza ohlangothini kangcono. Ukusebenzisa inkampani ubuchwepheshe obusha emsebenzini wokukhiqiza amathayi ukumupha ethuthukisiwe izici traction futhi Ukweqa ezinhle.
Abathengi kufunwe amathayi hhayi kuphela "Kama Euro 129". Izibuyekezo kuvamile ukukhuluma ngezindawo Euro-131 amathayi, izimpawu Ukuvikelwa ngcono ngokumelene aquaplaning. Yokudonsa amathayi yabonisa kakhulu futhi izuzwe izinkomba ezinjalo ngenxa inani elikhulu anemifantu idayagonali phezu. Figure ngenkathi ribbed ngakhoke isiqinisekiso esihle braking ukusebenza kanye yokusabela eqondile amasondo ayo.
Tyres izimoto commercial
Le nkampani inyathelisa hhayi umgibeli kuphela ezimoto "Kama 129 Euro." Photo ukuze ahlole tinhlobo letibanti letehlukene imikhiqizo ku izimoto lemikhiqizo ezahlukene kanye uya khona. Ngokwesibonelo, ngenxa "Kama" imoto commercial inikeza EURO imodeli LCV-131, ithuthukiswe ngokuhlanganyela ukukhathazeka FIAT. Sibonga i yimpandla design elungiselelwe, imoto yabonisa handling ezinhle nokuhlale unyathela amabhuleki, futhi lezi zibalo musa zincike ezimeni sezulu. Ukwakheka yimpandla kangangokuthi izici elihlangana zenziwa ngcono komgwaqo (ezomile noma ezimanzi), lapho bafake isondo kakhulu ukubuyeka. iphethini design kusengaphambili, ngaleyo ndlela kuncishiswe kunomsindo. Kubalulekile ukuthi yimpandla has anemifantu ngokufanele ngezindlela ezahlukene, futhi ikuvumela ukuba sokukhipha amanzi ngendlela esifike ngesikhathi futhi ukwandisa induduzo ukushayela.
isondo osabalalayo "Kama-106" is ngokukhethekile eyenzelwe imodeli izimoto Suzuki Vitara futhi Mitsubishi Outlander. Idumile abathengi ujabulele kanye amathayi "Kama-221", okuyinto zenzelwe ukuba uthonye imodeli imoto Terrano Nissan, Jeep Cherokee, Ford Explorer, Range Rover. Zonke-inkathi yimpandla design lihambisana kuhlanganiswe ukwakha ngohlaka kuyisiqinisekiso sokuthi umshini ngeke kancane kancane futhi ngokuqinisekile ukuba baziphathe endleleni.
Kanye amathayi "Kama Euro NK 129" wathola Izibuyekezo omuhle futhi model of isondo "Kama-214." Ziklanyelwe izimoto Suzuki Vitara, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander futhi ezahlukene wonke-sezulu iphethini wokudlala. Lokhu ephumelelisa ukusebenza ngesivinini ezinhle nokuphathwa ngcono.
Ngenxa yokuthi i-abakhiqizi zinikeza ukhetho olukhulu amathayi ehlobo, kufanele uqaphele kwezinye izici abalithandayo. Nyathela Okokuqala, indima ebalulekile udlalwa inikeza traction isondo ne endleleni. Ngokwesibonelo, "Kama Euro NK 129" (ukubuyekezwa ngaso sonke isikhathi kuhle) ine iphethini azilingani, okuyinto kwahambisana anemifantu. Lokhu kuqinisekisa hhayi kuphela adhesion ezinhle komzila womgwaqo, kodwa futhi ukuthuthukiswa umshini.
Okwesibili, kubalulekile ukuba acabangele usayizi akhawunti amathayi. Khetha kumele kube ngokuhambisana ezibekiweko lobuchwepheshe, okuyizinto zonke imoto. Kungakuhle ngoba ehlobo Udinga ukukhetha amathayi ububanzi ezihlinzeka operation ephephile izimoto, kanye unike amandla ukubala isivinini ngendlela efanele.
Okwesithathu, idlala indima ebalulekile silinganisa ikhono zenjoloba. Uma isondo kuyinto ongenakulinganisela, kuyoba ngokushesha uzokhathala, futhi lokho kuyoholela izindleko engathandeki ezengeziwe.
New noma kusetshenziswe / babe?
Ukukhetha amathaya emoto, abaningi zisekelwe amakhono sabo sezimali. Iningi ezongayo kwikhwalithi efanayo nokunokwethenjelwa abakhiqizi ezifuyiwe yikona "Kama Euro 129" amathayi. intengo zabo iqala ruble 1475, futhi seqiwe ongafinyelela ruble 3900. Ezama ukulondoloza abanye abashayeli bakhetha ukuthenga amasondo esetshenziswa, kodwa kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama:
Ukuphila kwabo buzoba buncane kakhulu ukwedlula imikhiqizo emisha.
I degree of bafake akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukunquma ncamashi.
Ngakho, kungcono hhayi ukuthenga ingulube in a xhoxha, futhi makudle onobuhle ezintsha amathayi, ikakhulukazi ngoba angathengwa ngenani lentengo elikahle.
"Kama Euro 129": ngobuhle nangobubi bawo
Ngakho, ake afingqa. Iningi abathengi uthanda lokhu brand kanye imodeli amathayi, iphawula lokhu okulandelayo ngesithunzi sabo:
- izinga okusezingeni eliphezulu;
- Ukuphathwa imoto enhle;
- ngemali ephansi;
- bafake ukumelana;
- adhesion ezinhle noma indlela - kokubili ezimanzi futhi omile.
Kodwa kwakungeyona ngaphandle impendulo engeyinhle. Ngokuvamile, abashayeli bathi ngokweqile umsindo iraba, futhi amasondo akuzona ukuziphatha ozinzile futhi eqiniseka endleleni nge semfene njalo. Nokho, lezi zimfanelo ngoba iningi abashayeli akuzona njengoba abalulekile njengoba zonke isondo yasekhaya ezovumelana nezimo Russian. Futhi-ke kufanelekile imigwaqo yethu okungaphezulu kakhulu imodeli efanayo amathayi angaphandle ezenziwe.
Le nkampani "Nizhnekamskshina" umise ngokwaso njengoba umphakeli okuthembekile imikhiqizo izinga, okuyinto kakhulu ukuba abashayeli. A izinga okusezingeni eliphezulu kufinyelelwa ngenxa yokuthi iqembu imboni ochwepheshe kweqiniso, ukulawula isikhunta inhlangano inqubo, kahle kokuqhuba ukuhlolwa amathayi. Ngenxa yalokho, amakhasimende akwazi ukuhlola ehlobo "Kama" amathayi okubonisa ukubamba kakhulu kanye nokusebenza.
Ixhuma-amplifier ngomsindo kangcono
Wokucwebezelisa of izibani ngezandla zabo
"Ensimini" e 2121 - Tuning off-road
Ethengiswa kakhulu kunazo Chevrolet imodeli: incazelo, ngemoto test Chevrolet izimoto
Ikhekhe le-chocolate-cottage cheese: izici zokupheka, zokupheka nezincomo
Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani font enkulu kukhompyutha yakho
Hlabelelelani noma ithi? Uyini recitative e umculo
Yini amahhotela ashibhile eMoscow?
Lisho ukuthini igama Pauline? Ake sithole ukuthi kwakungani!
Phinda idatha kusuka neSd Kufakiwe
Modern okulala zakudala: izici sokubhalisa, incazelo, isithombe
Uyini sesifufula, futhi yini ibadla
Steklomagnezit (SML): Izibuyekezo
Ruslan Nigmatullin - Unozinti wangaphambili futhi Dj abadumile